Ubuhlakani bokufakelwa - ngabe sebukhona vele? > UVielhuber David
Ubuhlakani bokufakelwa - ngabe sebukhona vele?03
Noma ngubani oqalaza ubuhlakani beminyaka emibili edlule uzothola amagama afana nobuchwepheshe obuhlakaniphile noma ubuhlakani bokuzenzela (AI) kaninginingi. Kepha ngokuhlolisisa, siyabona ukuthi amadivayisi amaningi asekude nobuhlakani bokufakelwa. Amasistimu asekhaya ahlakaniphile afana nalawo avela ku-Amazon noma ku-Google ngokuvamile ahlanganiswa ne-AI.
Kepha nalapha, kubonakala sengathi akunalutho. Imisebenzi yomuntu ngamunye yenziwa ngenkulumo. Kususelwa ezinhlelweni eziyinkimbinkimbi, kepha akuhlangene kakhulu nalobu buhlakani bokufakelwa. Umbuzo uvela wokuthi ngabe asevele ekhona ekusetshenzisweni kwangasese futhi uma kunjalo, ngezinga elingakanani.
KI - ukuphi manje
Okokuqala, kufanele kushiwo ngokusobala ukuthi i-AI emikhakheni ezimele ngokusobala ayinakwa kakhulu. Emkhakheni wezempi, izinto zihluke kakhulu. Kusetshenziswa ubuhlakani bokufakelwa, kuhlongozwa izifundo zonke lapho ukuze kugwenywe ukwedlula nokufuna ngenkani. Izinhlelo zonke zezikhali zifakwe i-AI, njengamanye amasistimu wezindlela. Ukuhlelwa okwenziwe ngamadijithi ngokuthunyelwe komyalo wedijithali kuhlelwe
Lokho osekuvele kuyinto ejwayelekile emkhakheni wezempi kuze kube manje kutholakala kuphela emikhakheni embalwa emkhakheni womphakathi. Amarobhothi nezimoto ezizimele kufanele kushiwo lapha. Inkinga eyisisekelo nge-AI ukuthi incazelo enjalo ayikho. Ezimweni eziningi, lokhu kuzovumela abakhiqizi ukuthi bamane balebule imikhiqizo yabo yezobuchwepheshe ngobuhlakani bokufakelwa. Ukuzenzakalela sekuvele sekuvele njenge-AI.
Izicelo ezinjenge-Google Translator, nazo ezisebenzisa i-AI, zibonisa ukuthi kudala yafika ezimpilweni zethu zansuku zonke. Kodwa-ke, kuze kube namuhla umphumela awukholisi ngempela.
Ukushayela okuzenzakalelayo kungenzeka nge-AI kuphela
Isibonelo esihle kunazo zonke ukushayela okuzimele, obekungeke kwenzeke ngaphandle kwe-AI. Kumele futhi kushiwo lapha ukuthi ayikho incazelo ehleliwe nokuthi ubuchwepheshe be-AI ekushayeleni busesekuqaleni. Kepha ubuhlakani bokufakelwa abutholakali kuphela ekushayeleni okuzimele, sesivele sikuthola ezinhlotsheni ezahlukahlukene zabasizi. Kungaba nomsebenzi we-braking ophuthumayo, ukupaka okuzenzakalelayo noma i-adaptive cruise control.
Vele, lokho akusibo ubuhlakani bokufakelwa esibaziyo kumafilimu noma ezincwadini. Intuthuko ayikafiki kulelo qophelo.
I-AI ekuthengiseni oku-inthanethi
Izindlela zokuqala zokuhweba nge-inthanethi zingabonakala ngokucacile. Ukumane wakhe isitolo nokwenza i-SEO akusasebenzi. Bonke abahlinzeki abakhulu sebevele basebenzisa kakhulu i-AI. Kepha lokho kudinga nezinsizakusebenza eziningi. Izindlela zokuqala zifaka ama-bots wengxoxo nensizakalo, ngokwesibonelo. Ukuqala kokuqala kungabonakala kahle kulwazi lwamakhasimende ekhasino . Kodwa-ke, kuzoba nezinhlelo zokufunda cishe kuwo wonke ama-value value kungekudala. I-AI izothonya uhlelo lwamanani, ukuthengwa nokukhiqizwa. Esikhathini esizayo esiseduze, amarobhothi angaseluleka ngebhizinisi. Kunzima ukucabanga. Kepha eminyakeni engama-30 edlule besingacabangi nge-Alexa.
Hhayi kuphela ekuthengiseni oku-inthanethi, kepha nasezitolo zezitini nodaka, i-AI esikhathini esizayo izoqinisekisa ukuthi umsebenzi ojwayelekile ungazenzekela futhi ngaleyo ndlela uthole nemininingwane ngentuthuko ezayo. I-AI izothonya izimpilo zethu kuzo zonke izindawo ngokuzayo.